Cali Khaliif Galeyr oo u hanjabay Somaliland “Hadii heshiiskii ay wax ka bedelaan anagana….” – Balcad.com Teyteyleey
Cali Khaliif Galeyr oo u hanjabay Somaliland “Hadii heshiiskii ay wax ka bedelaan anagana….”
Isagoo Wareysi siinayey mid kamid ah Tv-yadda Somaalida Cali Khaliif Galeyr Madaxweynaha Maamulka Khaatumo ayaa waxaa uu hanjabaad aad u culus hawadda u soo mariyey Maamulka Somaliland.
Cali Khaliif Galeyr ayaa waxaa uu Somaliland ku eedeyey in ay wado qorsho ay ku dooneyso in ay wax kaga badasho heshiiskii ay dhawaan wada gaareen labadan maamul oo dhawaana dhameystirkiisa loogu madalsanaa in Burco lagu qabto.
“ Waxaan Tv-yadda ka daawadey in Somaliland ay wado qorsho ay wax kaga bedeleyso heshiiskii aan wada saxiixaney, hadii midaa ay sameyaan adeer anagana ha ogaadaan inaan heshiiskii gabi ahaantiiba ka baxney” waxaa sidaa yiri Cali Khaliif.
“ Qolyaha idin cadaadinaya ee meesha idinla jooga masiirka Khaatumo ma matalaan ee adinkey idin yihiin shaqaale” ayuu cali sii raacsadey.
“ Waxaan Somaliland u sheegayaa in heshiiska sidii uu u ahaa ay u dhowrto hadii ay sidaa sameyn weyso waxaa imaneysa in anagana aan ka noqono wixii aad adinkaba ka noqteen een ku heshiiney” ayuu hadalkiisa ku soo xirey.
Dhawaan ayeey aheyd markii labada maamul wada hadalo mudo soo qaatey kadib ay heshiis is afgarad ah ku kala saxiixdeen Magaalada Hargeysa, iyadoona dhameystirka heshiiska lagu madalsanaa in BUrco lagu qabto.
The post Cali Khaliif Galeyr oo u hanjabay Somaliland “Hadii heshiiskii ay wax ka bedelaan anagana….” appeared first on Ilwareed Online.
Gaadiid AMISOM ay leeyihiin oo dad ku jiiray Ceelasha Biyaha…
Waa cajiib in Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur “Walking Dead” uu Halyey noqday…